Yariisow oo Tiray Qoraal Ka Dhan Ahaa Wasaaradda Caafimaadka – Goobjoog News
Cabdiraxmaan Yariisow oo ah guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho ayaa tiray qoraal uu ku weeraray Wasaaradda caafimaadka, isaga oo ku tilmaamay mid maseyrsan, oo xaasid ah. Yariisow waxaa qoraalkiisa ku jiray.
”Waa nasiibdaro in Wasaarada Caafimaadka DFS ay ka maseyrto Maamulka G/Banaadir oo ay si xaasidnimo u dhaqanto. Duqa Muqdisho oo sii-hadlaya waxaa uu yiri.
waxaan jirin wax war ah oo ka soo baxay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan qoraalka uu soo saaray Yariisoow.